ᐈ Maitiro ekugadzira M3U IPTV Lists mu 【2022】 - ZVINYORE
M3U Spain mazita
Latin IPTV zvinyorwa
Mamwe M3U Mazita
Wona M3U Lists muVLC
Wona M3U rondedzero paRoku
Dhawunirodha GB WhatsApp Delta APK
BlackMart APK Yazvino Vhezheni
Dhawunirodha Deezer Premium MOD
Yazvino vhezheni yeMX Player Pro
Dhawunirodha Tinder Goridhe Mod APK
Yakanakisa M3U IPTV Zvinyorwa 2022
IPTV tekinoroji yanga iine boom yakawanda mumakore gumi apfuura, uye mukati merwendo urwu, yakashanduka yakawanda. Parizvino ingangoita chero yekushambadzira yevaraidzo chikuva inoshandisa iyi protocol kugadzira M3U rondedzero.
Kana iwe uchiri kuziva nezve IPTV uye M3U rondedzero, iyi positi ndeyako. Iwe uchawana zvese nezve protocol iyi kuti unakirwe nesarudzo dzainotipa muvaraidzo uye maitiro ekugadzira yedu M3U rondedzero kuti uvawedzere kune edu IPTV maseva.
Chii chinonzi M3U list?
Ndeipi tekinoroji inoshandiswa neM3U kushanda?
Ndezvipi zvirimo zvinogona kunakidzwa neiyo M3U runyorwa?
Sei uye kupi kurodha M3U zvinyorwa?
Chii chinonzi IPTV?
Chii chinonzi IPTV chiteshi rondedzero?
Kusiyana pakati peIPTV uye Kutenderera
Maitiro ekugadzira iyo M3U IPTV rondedzero ine zvirongwa
Maitiro ekugadzira M3U IPTV rondedzero ine notepad uye kugadzirisa chiteshi
Chii chinonzi IPTV M3U Mexico Online rondedzero inosanganisira?
M3U rondedzero yeMexican chiteshi
M3U mafirimu mazita kubva kuMexico
Iyo yakanakisa yakagadziridzwa uye yemahara M3U zvinyorwa
IPTV rondedzero - M3U yeSpain nemitambo
IPTV zvinyorwa - chiLatin uye nyika M3U
IPTV rondedzero - M3U yemamuvhi uye akateedzana
Maitiro ekurodha M3U zvinyorwa muQviart Combo V2
Maitiro ekuisa M3U zvinyorwa muSS IPTV
Nei kugadzira runyorwa muSS IPTV?
Whatsapp Delta yazvino vhezheni
Iyo M3U fomati ndeye flat-mhando faira yekuwedzera, iyo inogona kuvhurwa nekugadziriswa nechero mavara edhita, semuenzaniso, iyo Windows notepad. M3U ndiyo acronym ye "MPEG version 3.0 URL".
¡Rudzi urwu rwefaira rinoshandiswa kugadzira kana kuchengeta midhiya yekutamba kana Playlists.
Mukutanga kwayo yaingotsigirwa neWinamp, asi nhasi inogona kutsigirwa nenhamba huru yevatambis, izvo zvaita chiyero kana zvasvika pakugadzira playlists.
Zvinoitwa neM3U rondedzero inotsanangura nzvimbo yemafaira ese emultimedia atinoda kutamba. Kune izvi, pane imwe nzira yekunyora yatinofanira kushandisa kana tichida kugadzira zvinyorwa zvedu. Tichadzidza izvi pasi apa.
M3U rondedzero inoumbwa neakatevedzana kero dzewebhu anga ari nzvimbo iri kure yezvinyorwa kuti unakirwe, unogona kusanganisira premium zvirongwa kana kunyange zvizere chiteshi kubva chero kupi zvako munyika, zvisinei nekuti ndevemunharaunda, yenyika kana yepasirese.
Kuti rondedzero yeM3U ishande, inofanirwa kuwedzerwa kune media player inotsigira rudzi urwu rwefaira.. Parizvino, chinenge chero application kana chirongwa chakagadzirirwa kutamba multimedia zvemukati chinokwanisa kutamba iyi faira fomati pasina kunetseka.
Aya marudzi emazita ane mukana wekuti anogara achigadziridzwa kure.Nenzira iyi, isu hatizonetseke nezve kupera kweiyo URLs uko data remukati memultimedia yatinoda zvakanyanya inotambirwa.
Yakanakisa M3U Zvinyorwa zveIPTV muSpain 2022
Pamusoro 3 M2022U Latino Lists
Maitiro ekugadzira M3U Zvinyorwa zveKodi
Maitiro ekuona M3U rondedzero paRoku
Maitiro ekuwedzera M3U zvinyorwa muPlex
Maitiro ekuwedzera M3U zvinyorwa muOTTPlayer
Maitiro ekuona M3U rondedzero muVLC
Rondedzero yeM3U inogona kuve nechero mhando yezvinyorwa zvaungafungidzira. Kukwanisa kuwana rondedzero dzakasarudzika dzematanho akasiyana kana nematanho chaiwo edunhu kana nyika.
Saizvozvo, unogona kuwana kana kuchengetedza mafirimu, nhevedzano uye zvinyorwa mumutauro wako wekare kana mune mimwe mitauroKunyangwe zvinyorwa zvidiki zvinogona kuchengetwa kune chimwe nechimwe chezviri mukati.
Mafaira emunharaunda anogona zvakare kuchengetwa neM3U playlist, kuitira kuti iwe ugone kuronga iyo yekutamba, wobva wanakidzwa nerondedzero dzako pane chero mudziyo kana midhiya inoridza.
NeM3U rondedzero tinogona kunakidzwa nekutandara kwakawanda kwekutepfenyura pane chero chishandiso kana kuburikidza nemultimedia zvemukati vatambi. Tevere tichatsanangura kupi uye sei kwaunga dhawunirodha M3U zvinyorwa.
IPTV inonyora Spain
Kuti utore pasi M3U rondedzero unofanira kutanga waenda kwairi Iyi link, uye wobva waisa neako username nepassword. Kana iwe usina, unogona kuigadzira zviri nyore nekutevera bhatani "Sing Up" Kana iwe unogona kushandisa mapuratifomu eGoogle, Facebook ne Twitter kuti uzviite nekukurumidza.
Kana tangopinda peji, tinoenda kubhawa yekutsvaga uye tonyora zita rezita ratinoda kutsvaga. Zvinonyanya kukosha kuti ugare uchiisa prefix "IPTV" o "M3U" kuitira kuti injini yekutsvaga inotitora zvakananga kune aya marudzi emazita.
Kuti uwane zvinyorwa zvakagadziridzwa enda kubhokisi rinoti "Relevance" uye sarudza sarudzo "Date" uye ipapo iwe uchaona ese achangopfuura rondedzero, uye kuti anogona kunge ari kushanda akazara.
Pakupedzisira unosarudza nekudzvanya pane rondedzero yaunoda, woenderera mberi nekukopa kero inoonekwa mubhawa rekero. Iyi ndiyo URL yauri kukopa mune yako IPTV application kana mune multimedia yemukati inoridza yauri kushandisa.
Kana iwe uchida kuziva nezve akanakisa zvirongwa uye vatambi veIPTV kana M3U rondedzero iwe yaunogona kuisa, tarisa zvedu zvimwe zvinyorwa kuitira kuti iwe ugone kusarudza iyo inonyatsoenderana nezvido zvako.
Zvino, iyo tutori yatichangobva kutsanangura inoshanda kune rimwe remapeji anozivikanwa kuwana M3U rondedzero, asi iyi haisiyo yega webhusaiti muchikamu chayo. Rondedzero inotevera inotsanangura mamwe mapeji ewebhu kuti iwe uwane yako yakanakisa M3U rondedzero.
Vadivelu Comedy Stratustv: Inokuratidza nhevedzano yezvinyorwa muM3U fomati iwe yaunogona kuwedzera uye kutamba zviri nyore. Mazita acho anorongwa nenyika uye mumitauro yakasiyana-siyana. Rondedzero yega yega ine zviteshi zvemukati zvakasiyana zvekuravira kwese uye chero zera.
IPTVSRC: Pa peji ino unogona kuwana zvinyorwa zvakagadziridzwa nezuva. Inopa rondedzero muM3U nemhando dzakasiyana dzemukati mumatashi, akateedzana uye mafirimu, kuwedzera kumitauro yakawanda uye chero zera. Zvakare seyakawedzerwa kukosha mune yega rondedzero iwe unogona kuwana chiteshi muHD.
Inokodzera iwe: Iri chaizvo bhurogu inotaura nyaya dzakasiyana siyana. Zvisinei, mune zvinotevera link Iwe unogona kuenda wakananga kune yekupinda inokuratidza iwe akateedzana akagadziridzwa M3U rondedzero uye kuti iwe unogona kuwana kuti imhando yemukati, sezvo iwo akarairwa.
Yese APK: Iyi blog ine yekupinda ine nhevedzano yeakagadziridzwa uye yemahara rondedzero. Kuti vatore tinya pano.
Fluxus.TV: Pawebhusaiti ino unogona kuwana infinities yezvinyorwa muM3U fomati yakagadzirira kudhindwa pasina zvikanganiso nekuti inogara ichivandudzwa. Zvirimo zvakasiyana uye unogona kuwana akateedzana, mafirimu uye chiteshi kune chero zera uye mumitauro yakasiyana.
IPTV inomirira Internet Protocol Television, iyo Iyo tekinoroji inoshandisa IP protocol uye internet kufambisa multimedia zvirimo kuburikidza neKutenderera. Inowanzo shandiswa kufambisa chiteshi, akatevedzana uye mafirimu pamusoro pebroadband network.
Kushandiswa kwebroadband network kunobvisa kushandiswa kwetambo dzinogumbura uye antenna. IPTV irwo runyorwa rwezviteshi zvinofambiswa pamhepo uye zvatinogona kuwana pane chero mudziyo, sezvo aya rondedzero isu tinogona kuaisa mune chero application yekuburitsa yemultimedia zvirimo.
Kune mhando yerondedzero ndiyo inonyanya kushandiswa muIPTV mapuratifomu, ndiwo akagadzirwa ane M3U ekuwedzera. Ngatione zvino zvavari uye kuti tingagadzira sei rondedzero yedu kuburikidza neIPTV.
IPTV inonyanya kufarirwa nekuda kwekuti haufanire kuhaya opareta kuti unakirwe nekutepfenyura zvemukati, izvi zvinokusunungura kubva kune yekuwedzera mari inobatsira kwazvo kuchengetedza hupfumi. Ukatadza izvo, unogona kunakidzwa neIPTV kuburikidza neIPTV kana M3U zvinyorwa.
Iyo IPTV runyorwa inoshandiswa kuchengetedza kero kana maURL ayo akasiyana chiteshi anoshanda muIPTV anowanikwa kubva pawebhu. uchishandisa kero dzeIP dziri kure.
Iyo IPTV rondedzero yatinowanzo kuwana paInternet inouya muM3U fomati, inova chimiro chepasirese, uye inoenderana nevazhinji multimedia zvemukati vatambi, zvisinei, unogona kuwana IPTV rondedzero muM3U8 kana W3U fomati.
Zvese zviri zviviri sevhisi uye IPTV uye kutepfenyura zvine zvakawanda zvakafanana zvine chekuita nehumwe hunhu, zvisinei, kune mimwe misiyano inopa yakasarudzika kukosha kune imwe neimwe yeaya masevhisi anoitirwa varaidzo.
Musiyano unonyanya kukosha ndewekuti IPTV runyorwa inoshandisa yakavanzika network, iyo inofarira kutenderera kwedata nekukurumidza uye yakagadzikana nzira.. Zvichakadaro, masevhisi ekutepfenyura anosvika kune imwechete yakavhurika, isina kutariswa network senge email uye kubhurawuza kwewebhu, kureva, isina-yakazvitsaurira network.
Muchidimbu, kutepfenyura terevhizheni sevhisi inoda yakakwirira yekubatanidza zvinodiwa, nepo IPTV rondedzero isingade zvakawanda zvinodikanwa, saka zvirimo zvinogona kunakidzwa nekusanyanya kukwira internet kumhanya.
Kana iwe uchida kugadzira M3U runyorwa, unofanira kutanga waziva kuti pane yakasarudzika yekuraira chimiro chaunofanira kurangarira kugadzira inoshanda nemazvo M3U IPTV runyorwa.
Ichi chivakwa chinotevera:
#EXTINF: (nguva), (maitiro), (zita rechiteshi)
Isu tiri kuzotsanangura zvinorehwa neprotocol yega yega:
# EXTM3U: Zvinosungirwa kuiisa chete pakutanga kwechinyorwa. Uyu murairo unoudza mutambi kuti rondedzero iri mune yakawedzera M3U fomati uye izvi zvinodaro nekuti ine humwe humwe hunhu husina kuwanikwa mune yakakosha M3U runyorwa.
#EXTINF: Ndiwo murairo unoratidza panotanga imwe metadata iyo Yese Yekutenderera mune rondedzero. Uyu murairo unofanira kushandiswa pese patinoda kuwedzera chiteshi, kureva kuti, kana tikanyora chiteshi gumi, murairo unofanirwa kuoneka kagumi pane yega yega.
Inoperekedzwawo nehumwe hunhu hwemultimedia yatiri kuzogadzira. Zvinosanganisira: nguva, hunhu uye zita rechiteshi.
Mumwe nomumwe wavo anofanira kuparadzaniswa nenzvimbo isina chinhu. Ngationei kuti chimwe nechimwe chezviito izvi chinoshandisirwei.
Nguva yacho: inoenderana nenguva inoyerwa mumasekonzi efaira remultimedia riri mubvunzo. PKune IPTV runyoro chete ma paramita maviri anozivikanwa, kukosha zero (0) uye kukosha kubvisa imwe (-1).
Kazhinji isu tinofanirwa kushandisa kukosha -1 kuratidza kune mutambi kuti nguva yekutepfenyura haina kurongeka kana kuti haigone kutsanangurwa.
Hunhu: Irwo rumwe ruzivo rwatinoda kuratidza mukati memutambi. Aya data anogona kunge ari gwara rehurongwa, zvigadziriso, chiteshi logo, mitauro uye humwe hunhu.zvisinei izvi ndezvekusarudza.
Mutsara wemusoro wechiteshi: inoratidza zita richaonekwa pamutambi. Inofanirwa kutangirwa nekoma (,) uye hapana nzvimbo mushure mecomma.
URL: Pano isu ticharatidza iyo URL kana webhu kero uko chiteshi, nhevedzano kana bhaisikopo ratinoda kuwedzera pane rondedzero inotambirwa.
Saizvozvo, iyo kero kana nzira yenzvimbo iyo faira yemultimedia inotambirwa yakanyorwa pano, ndiko kuti, iyo yakachengetwa pakombuta yedu.
Zvino zvaunoziva izvi, tinogona kutanga kugadzira yedu yekutamba mu .m3u fomati, uye chinhu chekutanga chatichaita kuvhura text editor zvinoenderana nesystem yedu yekushandisa.
Chinhu chinotevera chichava chekutanga kuwedzera ruzivo rwezvisungo zvatiri kuda kubereka tichitevera murairo wemirairo watakamboratidza kare. Kuvarangarira:
Rangarirai kuti murairo wekutanga; kureva kuti; # EXTM3U inofanira kungowedzerwa kamwe chete mumutsara wekutanga, haifanirwe kudzokororwa kubva pano zvichienda mberi. Ngatitarisei mimwe mienzaniso yemirairo iyi:
#EXTINF:-1, Muenzaniso bhaisikopo (2017)
#EXTINF:-1, Star Wars Chikamu I
H: \_ PELICULAS \_ STAR WARS \_ Star Wars Chikamu I The Phantom Menace (1999) .mkv
Chekupedzisira, kana tawedzera kero dzeese chiteshi, akatevedzana uye mafirimu atinoda kuona, isu tinofanirwa kuenderera mberi nekuzvichengeta.
Mune iyo faira tab, iwe unofanirwa kuenda kune iyo sarudzo "Save as". Kana iyo inotevera hwindo inoratidzwa, iwe unofanirwa kutsvaga nzvimbo yauchachengeta faira uye muchikamu chezita unofanira kuisa zita rauchapa faira. uye wedzera kuwedzera .m3u panoperera zita.
Kana iwe ukasawedzera ruzivo urwu, saka runyoro haruzokwanisa kudhindwa nemashandisirwo kana zvirongwa kwaunoda kuburitsa rondedzero idzi.
Zvino zvawave neyako yakavanzika runyorwa yakagadzirwa, iwe unofanirwa kuenda kunoiisa mune yako yaunofarira application kana chirongwa uye unakirwe.
Kana iwe uchiri kuziva kuwedzera iyi runyorwa kune aya ekutamba zvirongwa, unogona kushanyira edu tutorials apo isu tichatsanangura nhanho nhanho maitiro ekurodha M3U zvinyorwa.
Isu tatoziva kuti M3U rondedzero ine zvinhu zvakasiyana siyana. Panyaya yeIPTV Mexico runyorwa, unogona kuwana ese emuno uye ekunze emitambo, nhau, firimu uye zvinyorwa zviteshi..
Mamwe ematanho anogona kuva:
Vadivelu Comedy TvNovelas.
Aztec Imwe HD.
Vadivelu Comedy SportsTV.
MuIPTV kana M3U rondedzero iwe unowana zviteshi kubva kunyika dzakasiyana nemitauro yakasiyana uye zvinogona kunge zvisiri izvo zvauri kutsvaga.
Saka, kana iwe uri kuMexico uye uchida kutsvaga rondedzero dzeMexican chiteshi nemabhaisikopo, tinokusiira iwe runyorwa runyoro ruchakubatsira iwe kuwana iyo yakanakisa varaidzo:
Izvozvi zvataisa chirongwa chinotsigira M3U mafaera, isu tinogona kungotarisa pakutsvaga akanakisa M3U rondedzero ari-kusvika-zuva uye 100% emahara.
Kunyangwe dzimwe nguva zvisiri nyore kuwana aya mazita, isu Takakutsvagira iwe uye tobva takusiira iwe akanakisa M3U rondedzero inogadziridzwa kure uye iyo yekuwana mahara zvachose..
Iyo Qviart Combo V2 idhijitari satellite uye TTDHD decoder kana inogamuchira, iyo ine zvakare yakajairwa DVB-T2 uye DVB-S2 rutsigiro. Inotepfenyurwa yakagadzikana uye inofambisa kurekodha kuburikidza nechero yayo maviri USB madoko, zvakare ine Media Player ine inoshamisa mufananidzo mhando nekuda kwayo 1080p FullHD tsananguro.
Kuti unakirwe nevaraidzo, unofanirwa kuisa yako yaunofarira chiteshi uye hezvino sarudzo mbiri, nerondedzero uye chiteshi nechiteshi:
Chekutanga pane zvese gadzirira runyorwa rwekuchengetedza chiteshi, wozo:
Isa pendrive yako nematashi uye sarudza iyo USB sarudzo.
Sarudza bhatani reyero rinoti "Lodha data".
Chishandiso chinokubvunza iwe kuenderana nenzira yemubvunzo "¿Simudza?", kwaunopindura kuti"SI".
Nguva yekuti "Download list", kuvhura zip file.
Kana uchiisa pendrive mudhikodha, unobva pachiteshi 1 kuenda Menyu> Kuwedzera> USB Menyu.
Iwe sarudza rondedzero.
Ichakukumbira kuti usimbise "Kuvandudza?"
Mushure memasekondi mashoma iwe unokwanisa kubuda mumenyu, uye wodzima chishandiso kubva kuremote control uye ipapo nemuviri kubva pairi bhatani rekudzima.
Paunotanga zvakare mushure meminiti, iyo M3U rondedzero inofanirwa kunge yatotakurwa paQviart Combo V2 yako.
chitsamba: Kana ikasavandudzwa, unofanirwa kutarisa kumisikidzwa kwetiweki. Uye kana uine chiteshi chakasara kumashure, unogona kutevera matanho anotevera.
Nhanho yekutanga ndeyekupinda iyo IPTV sarudzo.
Ipapo iwe uchaona inotevera skrini:
Wobva wasarudza sarudzo mutsvuku inoti "Wedzera”Kuwedzera chiteshi chitsva.
Iyo default password ichave 0000, pinda uye uenderere mberi:
Unogona kupinda chiteshi nenzira dzinoverengeka:
Mufananidzo URL: Nekusarudza museve wekurudyi wemirairo, unogona kuisa iyo URL nemufananidzo unova chiratidzo chechiteshi.
Vhidhiyo URL: Imwe sarudzo yauchaona paunodzvanya museve wekurudyi kuisa iyo URL yechiteshi chakasarudzwa muIPTV.
Mureza Wevakuru: yezviteshi zvevakuru.
Mushure mekupinda iyo chiteshi URL uye nekusarudza OK, tanga kurodha chiteshi.
Imwe neimwe chiteshi inotakura mumasekonzi makumi mana nemashanu.
Pakupera kwekupinda kwega kwega, peji rekutanga richaratidza tile. Apa ndipo paunoona mhedzisiro inokonzerwa nekuiswa kwemifananidzo kubva kumatanho. Kana isu tisina kuiwedzera nemifananidzo ichaita seizvi:
6.Kuwedzera mifananidzo, ingosarudza bhatani reblue rinoti “Hora".
Nematanho akareruka aya unogona kuwedzera nzira dzezvaunofarira kune yako Qviart Combo V2.
Tinokurudzira kuti uteedzere nhanho nhanho yekuisa iyo M3U runyorwa muSS IPTV:
Enda kunyorera SSIPTV paSmart TV yako.
Nhaurirano inotevera inovhura:
3.Sarudza iyo Zvirongwa, sezvinoratidzwa nemuseve:
Iyo inotevera skrini ichaonekwa:
Tevere iwe unofanirwa kugadzira kodhi yekubatanidza. Sarudza sarudzo Tora kodhi (Arrow 1), uye alphanumeric kodhi ichagadzirwa yaunofanirwa kukopa (Arrow 2).
Zvino enda kune yepamutemo peji ye SSIPTV kubva pabrowser yako nekudzvanya pano
Iwe uchaona inotevera skrini
Isa kodhi painoti Isa Connection Code (Museve 1 pamufananidzo unotevera).
Sarudza Wedzera ADVICE (Arrow 2).
Iri peji richavhura paunofanira kuwana parinoti Yekunze Playlist uye sarudza mukati ADD ITEM.
Hwindo rinobuda rinovhurika
Mune izvi iwe unofanirwa kuisa iyo inotevera data:
Zita Rakaratidzwa: Nyora zita. Somuenzaniso: My M3U list
Source: Iyo URL yeM3U rondedzero yaunoda kuisa.
Iyo pop-up hwindo inovhara uye iyo skrini icharamba iripo paunofanira kuchengetedza iyo yakapinda data, uchisarudza iyo sarudzo
Watove mukushandisa kweSmartTV yako unofanirwa kuvandudza ruzivo, uchisarudza icon ye reload kumusoro kurudyi kwemenyu:
Kubva zvino zvichienda mberi iwe unogona kuona ese machaneli kubva kune yako link.
Zvaitwa zvakaiswa yako M3U runyorwa paSS IPTV.
Kukwanisa kumisikidza yakasarudzika kurongeka, uye kubvisa zvisina kufanira mafaera, kana kuve kuwedzera matsva. Nenzira iyo iwe unozvichengetedza iwe dambudziko rekuwedzera ivo pachavo.
Rondedzero yega yega inofanirwa kudhawunirodha kune mudziyo kana kuti ichengetedzwe mu "My account", kana iri kushandisa ForkPlayer paSmart-TV.
Sechinyorwa chakakosha chekucherechedza, kana iwe uchida kuteerera mimhanzi, uye uine yakanaka internet yekubatanidza, haufanire kuchengetedza playlist. Izvo zvinongokwana kuti zvitakure kune mutambi, nharembozha kana PC.
Dhawunirodha yazvino vhezheni yeWhatsApp Plus (AntiBan) APK
Dhawunirodha Videoder Premium Apk 2022
Dhawunirodha yazvino vhezheni yeYouTube Music Premium APK
Yemahara IPTV Mazita evakuru (yakagadziridzwa 2022)
Maitiro ekuona IPTV rondedzero paKodi?
© 2022 MtresU • Yakagadzirwa ne GeneratePress